Dell က 1502 1506 1515 1702 1703 1705 1707 1901 ကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုကတ်ယာဉ်မောင်းကို Windows ဒေါင်းလုပ် | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
မေ 17, 2019 မောင်းသူ မောင်းသူ, ကြိုးမဲ့စက် 0
Dell ကဝိုင်ဖိုင်ကဒ်ယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု – 1502 1506 1515 1702 1703 1705 1707 1901
အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. မောင်းသူသာများနှင့်ယာဉ်မောင်း-နှင့်အတူ Dell ကဆော့ဖ်ဝဲကို download options များပါဝင်သည်.
device ကိုမော်ဒယ်: Dell ကဝိုင်ဖိုင်စီးရီး
ဘလူးတုသ်ယာဉ်မောင်းကဒီမှာ click နှိပ်ပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်.
Dell ကကြိုးမဲ့ Wi-Fi Software များအဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြုသည်, အဆင့်မြင့်အိုင်တီအုပ်ချုပ်ရေးမှူး tools တွေကိုမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့သူအိမ်တွင်အသုံးပြုသူများနှင့်စီးပွားရေးဖောက်သည်များအပါအဝင်.
Windows Vista က 32-bit နဲ့ / 64-bit နဲ့
Intel က HD Graphics Samsung က processor ​​ကို ဥပဒေရေးရာအနက် မိုဘိုင်းဖုန်း နည်းပညာ OS ကို-STORE စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Software များ စီပီယူ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု device ကိုမော်ဒယ် 64-နည်းနည်းက Windows ပရိုဆက်ဆာ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် HTC က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Nokia က Technology_Internet